The switch kunye neMTI Teleport iqabane ukwandisa ukufikelela kwehlabathi lonke ukuhanjiswa kwesiqulatho esiphilayo-Ukuboniswa kweendaba ze-NAB ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA.
ikhaya » iindaba » Itshintshiselwano lweTouch kunye neMTI Teleport yokwandisa ukufikelela kwihlabathi kukuhanjiswa kokuqukethwe
Itshintshiselwano lweTouch kunye neMTI Teleport yokwandisa ukufikelela kwihlabathi kukuhanjiswa kokuqukethwe
ENew York-uAgasti 12, 2019 - UkutshintshaIqonga lokuvelisa kunye nokuhambisa usasazo lwevidiyo bukhoma, lisebenzisene nayo I-MTI Teleport, Umnxibelelanisi weendaba waseJamani ophambili kwimithombo yeendaba, ukudibanisa nokwandisa ukufikelela kweenkonzo ezimbini zenkampani yokuvelisa kunye nenethiwekhi yokuhambisa. Ukuhamba kwenza kube lula kwaye kubize iindleko ezininzi kubathengi beTshintshi kunye neMTI yokufumana ukutya okuphilayo kunye nokusasaza umxholo ngaphandle kothungelwano oluthembekileyo, olubanzi lwelizwe jikelele.
“Ukusebenzisana ne-MTI Teleport linyathelo elibalulekileyo kwisicwangciso sethu sokukhulisa amazwe ngamazwe. Oku kuyakusinceda ukuba sincede abathengi bethu baqhubeke nokuhlangabezana nemfuno ekhulayo yehlabathi yezemidlalo kunye nokugubungela imicimbi, nakweyiphi na indawo, utshilo uEric Cooney, uMongameli kunye neGosa eliyiNtloko lesiGuquli seTshintsho.
Ndiyabulela kubuhlakani, i-MTI izokwazi ukubonelela abasasazi baseJamani ukuba bafikelele kuyo yonke inethiwekhi ye-The switch, ebandakanya i-United States, Canada, PRC, i-United Kingdom, iFrance, i-Australia ne-New Zealand, ngelixa iinethiwekhi zeTV, ukusasaza iinkonzo kunye nezinye abavelisi bomxholo besebenzisa i-The switch kufuneka babe nakho ukugubungela imicimbi ephilayo evela kwiindawo ze-MTI e-Austria, Jamani naseSwitzerland. Umzekelo, abathengi baseMelika beTshintsho baya kuba nako ukufikelela kwimidlalo efana nebhola ekhatywayo yaseBundesliga yaseJamani, ngelixa abathengi beMTI bezokwazi ukuya kwibhola ekhatywayo yeNFL, kwi-NBA basketball nakweminye imidlalo emikhulu yeligi evela eNyakatho Melika-apho iTshintshi iphantsi Uqhakamshelwano lokunxibelelana nayo yonke imidlalo yebala okanye ibala lezemidlalo.
I-MTI sele isebenzise ithuba ubudlelwane obukhulayo, ukusebenza kunye ne-The switch ukuze kuhlangulwe isigqubuthelo somdlalo wamanqindi kuyo yonke iJamani yomlo osindayo wobunzima phakathi kweTyson Fury yaseBrithani kunye noTom Schwarz waseJamani kwi-MGM Grand eLas Vegas kwinyanga ephelileyo.
ULudwig Schaeffler, iGosa eliLawulayo le-MTI Teleport, uthi, "Sisoloko sikhangela iindlela zokuphucula ukufikelela kwinethiwekhi kunye nokunxibelelana ukuhambisa imicimbi ngakumbi kunye namava asemagqabini kubathengi bethu. Ngokusebenzisana neTshintsho, sikwandisa amandla ethu okwenza oko kwaye sizisa ixabiso elikhulu kubathengi bethu, kwaye sinethemba lokunceda i-The switch yenza okufanayo kubathengi bayo. "
Kwilizwe elinezinto ezininzi ezenziwayo kwimveliso yevidiyo ephilayo kunye nokusasazwa, iSitshintshi sisoloko sivuliwe kwaye sisoloko sikhona-ukubeka indawo ebekiweyo yomgangatho ngomgangatho, ukuthembeka kunye namanqanaba angenakuthelekiswa nenkonzo. Yasekwa kwi-1991 kwaye yenziwa entloko eNew York, i-The switch yaqhagamshela ababukeli kwihlabathi liphela ukuze izehlakalo zeminyaka engamashumi amathathu; ukubazisela imixholo abayifunayo kuyo yonke umabonakude osemgceni, kwiimfuno nakwiqonga lokuhambisa; kwizikrini ezininzi nakwizixhobo.
Iqonga lethu elibanzi lemveliso lidibanisa iinkonzo zeselula kunye nekhaya ukwenza ukuba abathengi bethu babambe iindleko ngokukuko, ukuhlela kunye nokuhambisa okunyanzelekileyo kokuphila. Inethiwekhi yethu yothumelo inxibelelanisa izibonelelo zemveliso kunye ne-800 + yabavelisi bomxholo omkhulu womhlaba, abasasazi, imidlalo kunye neendawo zemicimbi; Ukudibanisa ngaphandle kwemvume abanini bamalungelo, abasasazi, amaqonga okusasaza, amaziko eendaba kunye neenkonzo zewebhu kunye nokuvula umxholo obukhoma, naphina emhlabeni.
Malunga ne-MTI Teleport
I-MTI yasekwa kwi-1993 kwaye ingumqhubi weendaba waseJamani ophambili weendaba ezibuyela umva edityaniswe kubo bonke abasasazi abaphambili, izindlu zeendaba, iindawo kunye nabaqhubi beqonga abasasaza. Amaziko eMTI abekwe ngqo entliziyweni yehabhu yeJamani yeendaba kwi-Unterfoehring edityaniswe ngefayibha kunye Sathelethi kumaziko eendaba ehlabathi. Isiseko saso se-100%, esinjalo, esisangqa esine-fiber yonke eJamani, zimbini Sathelethi amaziko othungelwano kunye ne-state-of-the-art Amaziko edatha enza isiseko senethiwekhi yokuthenjwa ephezulu ye-MTI yomxholo oyintloko phantse bonke abadlali abaphambili kwimarike yaseJamani.
Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane:
I-MTI Teleport München GmbH
I-Vionlabs 'esandula ukusungulwa yePlat Discovery Platform iphumelele i-Best of Show e-IBC2019 - Septemba 19, 2019
U-Síminn ukhetha iMediaKind yokuhambisa i-UHD yokugubungela i-English Premier League kubabukeli e-Iceland - Septemba 16, 2019
U-Hulu eJapan ukhetha iBitmovin ukuhambisa amava alandelayo kwi-intanethi - Septemba 14, 2019
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Cobalt Encoder UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Iintetho kunye nemisrya I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo	2019-08-12
Previous: Ukwenza inkwenkwezi ye-movie kukhangela ii-HBO's Big Little Lies
next: Amanqaku eNHL aneeLebhu ze-GB